DEG DEG+AKHRISO: Maxaad ka taqaan Xidig, Jawaari iyo Geesey, Yaase kala wata, Maxayse tahay Siyaasadooda? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
DEG DEG+AKHRISO: Maxaad ka taqaan Xidig, Jawaari iyo Geesey, Yaase kala wata, Maxayse tahay Siyaasadooda?
MUQDISHO(P-TIMES)- Kalfadhigga baarlamaanka faderaalka ee Soomaaliya ayaa socda waxayna maanta 10 January 2017, Xildhibaanada Soomaaliya dooran doonaan gudoomiyahooda oo xilkan sii heyn doona ilaa 2020-ka, haddii aysan dhicin Isbedelo siyaasadeed oo kasoo hormara waqtigii loogu talo-galay, waxaana saaka horyaala baarlamaanka mid kamid ah go’aamada masiiriga ah ee loo wakiishay.
Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa dadaal dheer u galay sidii uu ku ogaan lahaa xogta ka dambeysa Musharaxnimada xubnaha hadda isku soo taagay jagada gudoomiyaha baarlamaanka iyo rajada ay kala qabaan.
Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari waa barre Jaamacaddeed, wuxuuna bartay Sharciga iyo Qaanuunka, wuxuu afar sanno oo hore soo xukumayay baarlamaanka Soomaaliya, qabaa’il ahaan wuxuu ka soo jeeda Beesha Digil iyo Mirifle, oo tan iyo xornimadii jagadaas soo heysay.
Jawaari si fudud ayuu uga soo dhex baxay hardan dhexmarayay sanadkii 2012-kii Madaxdii dawladdii KMG ahayd iyo Puntland, isagoo ka guuleystay Prof-ka ay isku da’ada yihiin ee Cali Khaliif Galeyr, oo xiligaas uu watay Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Jawaari hadda wuxuu adeegsanaya aduun kasta oo lacageed, waxaa la rumeysan yahay in ay barri taarayaan Madaxda ugu sareysa dawladda Faderalka ee hadda jirta, waxaana la saadalinayaa in ay rajadiisu gaarsiisan taahy 85%.
Cabdifitaax Geesey waa Wariye horre oo siyaasadda u xuub-siibtay, wuxuu soo noqday Gudoomiyaha gobalka Baay, sidaas oo kale wuxuu hadda yahay Wasiir katirsan dawlad gobaleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ka dhisan, saameyntiisa siyaasadeed ee hadda ma sahlana, marka la eego dhinacyada uu taageerada ka haysto.
Mr, Geeseey wuxuu saaxiib wanaagsan la yahay dawladda Itoobiya oo uu lasoo jamhadeeyey, laakiin isku dayo uu sameeyey si uu taageero uga helo ayaa guuldareystay, wuxuuna hadda taageero ka helayaa Madaxda dawladda Faderaalka ee musharaxiinta ah iyo dhaqaale-yahano maalgashanaya soo bixitaankiisa.
Heerka Tacliinta ee Cabdifitaax Geeseey waxaa lagu tilmaamaa nin aan Jaamacad heer caalami ah ka bixin, laakiin ka loox-jiitay Waxbarashada gudaha, una soo joogay waayihii adkaa ee ay soo martay Soomaaliya.
Cabdirashiid Maxamed Xidig wuxuu ka soo jeedaa Beesha Daarood oo aan wali taariikhda qaban Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, laakiin wuxuu hadda Xidig doonayaa in uu furo bog cusub oo siyaasadeed, lana khalda habka awood qeybsiga dawladda faderaalka oo ah mid aan qorneyn, laakiin u muuqda balan iyo Is faham guud oo ay gaareen beelaha Soomaalida.
Mr, Xidig dadaal dheer ayaa lagu bixinayaa musharaxnimadiisa, waxay kala tageen oo is waayeen Isimo iyo Siyaasiin ay maalmo kahor wada socdeen, Is sharaxidiisa awgeed wuxuu taageero aan kala har laheyn ka haystaa dawladda faragalinta ku leh siyaasadda Soomaaliya ee Itoobiya.
Xidig waxaa sidaas oo kale qorshe la yaab leh u ciyaaraya codad badana uu saadalinayaa in uu ka helayo wadaadka Koofiyadda ku caan-baxay iyo Isbedelada Siyaasadeed ee Shariif Xasan Sheekh Aadan oo daaha-gadaashiisa ka maamulaya doorashadan.
Soo bixid uu maanta gudoomiyaha baarlamaanka noqdaa Mr, Xidig waxay dhabaha u xaaraysaa jahawareer Siyaasadeed oo ay gasho Soomaaliya afarta sanno ee nagu soo aadan, laakiin ragga Siyaasada falanqeeya ayaa kusifeynaya in ay talaabadaas dhinaca kale dhabaha u furayso Madaxweyne-nimada Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Dadka Dhaliila Xidig waxay ku sifeeyaan nin aan isku wadi karin 275-ta Xildhibaano ee kala duwan, kuwaas oo qof kasta raadinayo danaha u gaarka ah marar badan iyo kuwa beeshiisa, waxayna dadka naqdiyaa sheegayaan in uu marar badan wadi waayay shaqooyinkii Wasaaraddaha qaarkood.
Dood kasta iyo dhaliil kasta oo la jeediyaba, hadda waxay sadexdan Musharax fadhiyaan safka hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxay sugayaan codadka ay kala heli doonaan, waxaana mid kasta ay u tahay saacadihii ugu adkaa ee Noloshiisa oo uu mid kastaa filayo in uu isagu helo guusha kama dambeysta ah.
XOGTA PUNTLANDTIMES AYAA LEH FADLAN XAQ-DHAWR XAQUUQDA MIN-GUURINTA.